Tag: Otu Microsoft | Martech Zone
Tag: Microsoft Otu
Igbe, Dropbox, Google Drive… nwere ọtụtụ ndị ahịa niile na-eji ihe ntanetị dị iche iche, nchekwa ndị ahịa m bụ ọdachi. Otu ugboro n'izu ma ọ bụ karịa, ana m akwaga data ndị ahịa m niile na netwọkụ netwọk dị mma ma hazie nke akwadoro. Tobọchị ruo ụbọchị, agbanyeghị, ọ bụ ọdachi na-anwa ịchọta ma zipụ faịlụ… ruo ugbu a. Ndị ọrụ ibe anyị na-eji Droplr. Enwere m obi ike ịnweta ngwa ọrụ faịlụ ọzọ, ereghị m na mbụ. Otú ọ dị, oge na-aga